Ingozi akuyona Ukunakwa, Ingqikithi | Martech Zone
Sibe nengxoxo emnandi noMark Schaefer kwi-podcast yethu mayelana nokuthunyelwe kwakhe, Isebenza kanjani i-physics yemidiya yezenhlalo isu lakho lokumaketha. UMark unikeza ubufakazi bokuthi yonke inkampani kumele isebenze ekuhlinzekeni okuqukethwe okumangazayo, amavolumu aphezulu wokuqukethwe okubalulekile nokuletha lokho okuqukethwe lapho kukhona khona izethameli.
Lalela Ingxoxo yethu noMark Schaefer
Abanye abantu bakubiza lokhu okuqukethwe okulula ukudla namanye ama-nuggets. Kukhona ukuqhuma kwalokhu okuqukethwe ngenxa yabasebenzisi ababukwayo abanjengoPinterest, Instagram noVine. Njengoba kunikezwe lokhu kukhula kokuqukethwe okugaya kalula, inganekwane esatshalaliswa kukho konke ukumaketha naku-inthanethi yilokho Izikhathi ezinakwa abathengi ziyancipha. Ukwenza okuningi, iziphazamiso, i-imeyili, ifoni, izinhlelo zokusebenza… konke kumele kususe ukugxila kwethu kwimisebenzi esesandleni.
Hhayi i-BS ngezeluleko zikaMark, engikholwa ukuthi ziyabonakala. Ngibiza i-BS ukuthi ubude besikhathi sebhizinisi noma umthengi buya ngokuncipha. Ngikholwa ukuthi isikhathi sokunaka nokugxila kukhulu kunanini ngaphambili. Ngikholwa ukuthi abathengi basebenzisa ukusesha, imithombo yezokuxhumana kanye namathuluzi ukuze basebenze kahle ekusebenziseni ulwazi kunanini ngaphambili emlandweni. Eminyakeni engamashumi amabili edlule, besingenalo ithuba lokuthola siphinde sicwaninge kahle ukuthenga kwethu okulandelayo entendeni yesandla sethu. Bekufanele sithembele kochwepheshe bezentengiso nezinto zokumaketha sisodwa. Ukuthengwa nezinqumo kwenziwa ngokwethenjwa kokuxhawulana futhi kwesinye isikhathi okunye okuncane.
Ezinsukwini ze-intanethi ze-Intanethi, kwakubizwa ngokuthi yi imininingwane emgwaqeni omkhulu. Isizathu besilula… imininingwane eminingi kakhulu itholakala ngama-millisecond. Kubathengisi, lokhu kubaluleke kakhulu. Kuleli sonto eledlule, bekufanele ngithole uhlelo olusha lokuphathwa kwezikhangiso lwebhulogi yami ngemuva kokuthi olokugcina luyeke ezinye izici ezibalulekile. Ngemuva kwemizuzu embalwa, ngibe nohlu olunzulu lwamapulatifomu. Ngemuva kwamahora ambalwa, ngakwazi ukucwaninga ukuthi yiziphi ezinezici engangizidinga. Futhi ezinsukwini ezimbalwa, ngase ngivivinye ngayinye. Umphumela waba ukuthi ngithole ipulatifomu enazo zonke izici engangizidinga ngaphandle kokukhuluma nanoma ngubani noma ukusayina noma iyiphi inkontileka.
Ayikho enye iphrojekthi engangiyinake ngaleso sikhathi. Bengingekho ku-Facebook naku-Twitter. Bengingaziphenduli izingcingo. Isikhathi esifushane sokunaka? Hhayi ithuba. Lokho kusho, amasayithi amaningi engiwavakashele angilahlekele. Imibhalo yesici esingesihle, amavidiyo wokubuka okubuka lousy, izinqubo zokubhalisa ezinzima, akukho lwazi lokuxhumana… konke lokhu kuvimbele ikhono lami lokuthola umongo ebengiwudinga ukwenza isinqumo sami.
Abanye abathengisi basebenzisa ukugxila nomongo ngokukhohlisa ukuze kuzuze bona. Ucwaningo lwesilinganiso olumaphakathi, ngokwesibonelo, lukhomba iklayenti elibe nemiphumela emikhulu ngomkhiqizo noma isevisi ethengisiwe, liziba ezinye izinto ezinikelayo, futhi alokothi likhulume ngamakhasimende anemiphumela emibi. Umphumela uba ukuthi umthengi noma ibhizinisi elenza isinqumo sokuthenga lishiywa lihlaziya imininingwane bese libona ukuthi ngabe yisinqumo esihle sokuthenga.
Abafundi basele ukukhiqiza umongo wabo maqondana namaqiniso owanikeze wona. Lokhu kungaholela kokulindelwe okungahle kwenzeke futhi kungahle kukhiqize imikhondo engafanele inhlangano yakho.
Ukhiye weseluleko sikaMark nansi ukunikela ngokuqukethwe okumangazayo KANYE nokugcina ikhwalithi yokuqukethwe ngenkathi ikwenza kugayeke kakhudlwana. Ngokweqile, lo ngumsebenzi we umklami omkhulu we-inforgraphic. Ama-infographics amaningi kakhulu ayitoni yezibalo ezishaywe ngemidwebo emnandi. Kepha ama-infographics amahle kakhulu athuthukisa konke indaba ukuthi ihluzo nezibalo ezisekelwa.
I-Twitter ngokuqhathanisa ukubhuloga
Abaningi bangakukholwa ukuthi lo yiwo umehluko phakathi kwe-Twitter ne-Blogging… ukuthi i-Twitter ingeyomsebenzisi oshoda ngokunakwa nokuthi ukubhuloga kunikeza umongo esiwudingayo. Ngingasho ukuthi i-Twitter ibaluleke kakhulu ngenxa yomongo owukhiqizayo. Kunoma iyiphi inkampani enikeziwe, umsebenzisi, isihloko, isibuyekezo noma i-hashtag, i-Twitter iveza izingxoxo nezixhumanisi kahle ukukunikeza umongo owudingayo. Izinhlelo zokusebenza ezinjengeVine ne-Instagram azinalo ikhono lokuxhumanisa umongo ojulile - kepha ngikholelwa ukuthi lokho kuzofika (ikakhulukazi njengoba becela ukukhangisa).
Ungakhathaleli isikhathi sokunaka somfundi. Khathazeka ukuthi uhlinzeka ngenani elikhulu kakhulu nokuqukethwe okugcwele okulungiselelwe futhi kwehliswe kwimidiya esebenza kahle kakhulu, esebenzayo futhi ephathekayo.
Tags: isikhathi sokunakaUkukhangisa OkuqukethweimininingwaneukuphumelelaUkuphumelelagxilalula
Sep 2, 2013 ngo-11: 56 PM
Kufanele siqiniseke ukuthi okuqukethwe kwethu kuzofinyelela kubabhekiswe kithi ngokusebenzisa okwehlukile
tools.Kodwa-ke futhi kufanele sikhumbule ukuthi ukuba nokuqukethwe kwekhwalithi enhle kuyisihluthulelo sempumelelo yomkhankaso wethu.
Sep 3, 2013 ngo-11: 23 PM
Ayikwazanga ukuvuma okuningi. Eqinisweni, benginayo le ngxoxo namuhla nothile. Bathe "bheka ukuthi uGodin ubhala kanjani" ngaphendula ngathi, "lokho kufana nokuthi 'bheka ukuthi iHarvard iyinyusa kanjani imali.'”
Zombili zingaphandle. Okuqukethwe okuqinile, okushukumisa ingqondo, nokuhehayo KUZOKUTHOLA ukunakwa ngabantu.
Ubonakala. Siyabonga ngalokhu. Umlandeli omkhulu kaSchaefer (selokhu athumela lapha-http: //www.businessesgrow.com/2013/04/16/three-dazzling-examples-that-turned-online-influence-into-offline-result/)
futhi, sibheke phambili kwi-podcast… ubufakazi obuningi bephuzu lakho!